laacib » SAADAAL: Shabakada Xog Ururinta Ee ELO Oo Saadaalin Ku Samaysay Xiddiga Hanan Doona Abaalmarinta Ballon d&rsquo;Or & Qiimayntooda Oo Ay Suurogal Tahay Inaanad Ku Qancin.
Shabakada xog ururinta kubadda cagta ee ELO oo caan ku ah ururinta xogta kubadda cagta ayaa markan xog ka ururisay qaabka loo kala sarreyn doono ee abaalmarinta la sugi la’yahay ee Ballon d’Or iyo waliba xiddiga hanan doona.
Miyay hanashadii Koobka Aduunka ee xulka France noqon doontaa furaha lagu kala qaado abaalmarintan? Miyay noqon doontaa dhammaadka kootada Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi? Waa su’aalaha ugu muhiimsan ee la is weydiinayo kahor abaalmarintan.
Dhawaan ayay ahayd markii si sir ah loo ogaaday kala sarreynta codadka haatanba ay heleen murashaxiinta tartamaya iyadoo xiddigii kusoo guuleystay The Best ee Luka Modric uu yahay shaqsiga hoggaanka u haya.
Qiimaynta ELO ayaa ah mid gabi ahaanba ka yaabsatay jamaahiir badan iyada oo sheekada aan la rumaysan karin ay tahay in xiddiga ugu cad cad abaalmarinta ee Modric uu gabi ahaanba ka maqan yahay shanta tartame ee ugu sarreeya.
Booska koowaad ayuu soo galay weeraryahanka laacibkii Juventus ee Cristiano Ronaldo oo ay qabaan inuu yahay midka hanan doona abaalmarintan markiisii 6-aad.
Xiddiga ay sida ba’an usoo xifaaltamayeen CR7 ee Lionel Messi ayaa booska afraad kasoo muuqday isaga oo ka dambeeya xiddigaha ree France ee Antoine Greizmann iyo kylian Mbappe.
Booska shanaad ayuu soo galay daafaca ay dad badani u doodayaan sheegayaana inuu abaalmarintan mudan yahay ee Raphael Varane kaas oo kusoo wada guuleystay Champions League iyo Koobka Aduunka.
Kala sarreynta murashaxiinta Ballon d’Or ee qiimaynta ELO.
2: Antoine Grezimann
5: Raphael Varane
Haddaba, Akhriste miyay xogtani tahay mid aad ku raacsan tahay ELO, Miyuu Luka Modric u qalmaa in liiska shanta sarre laga cidhib tiro? Miyuu Cristiano Ronaldo mudan yahay booska 1-aad Messi-na u qalmaa 4-aad?